Hong Kong escalators, njem na-atọ ụtọ | Akụkọ Njem
Hong Kong escalators, njem na-atọ ụtọ
Mariela Carril | | Hong Kong, Ihe ị ga-ahụ
Ọ nwere ihe ọ bụla na-atọ ụtọ banyere ndị na-ebuli elu mgbe anyị bụ ndị okenye? Na ụkpụrụ ọ bụla, karịa nkasi obi nke ịrị elu ma ọ bụ ịrịda na-enweghị mgbalị, mana ọ bụrụ na anyị gaa ileta Hong Kong ọ bụ akụkọ ọzọ.
Ndị na-ebugharị Hong Kong bụ ezigbo ihe nlebara anya. N'ezie, ndị mmadụ nọ ebe a na-eji ha oge niile ma ha bụ akụkụ nke usoro njem nke obodo ahụ, mana maka onye njem ahụ, obi abụọ adịghị ya na ihe nkiri njem nlegharị anya mbụ, ihe ọchị na echefughị ​​echefu. Ebe ozo n'uwa ka iga njem onye kachasi elu na mba ụwa wuru n'èzí?
1 Hong Kong na akwa mgbago ya
2 Ebe nkiri Hong Kong
Hong Kong na akwa mgbago ya
Anyị kwesịrị ibu ụzọ cheta ya kemgbe 1997 Hong Kong na ókèala ya bụ akụkụ nke Ndị Republic of China. Ruo ihe dị ka otu narị afọ ha nọ na aka british Mana afọ ahụ agbazinye ego ahụ gafere ma China kwuru nke ya. Ọ bụrụ na ị gafeela afọ iri atọ ị nwere ike icheta emume inyefe mmadụ na ihe ekwuru na akụkọ banyere ihe ga-eme ndị mmadụ na usoro ndị isi ike na ụwa Kọmunist.
Hong Kong taa bụ mpaghara kwụụrụ onwe ya ebe China gosipụtara na nke "otu mba, sistemụ abụọ" (ọ nwere ikike nke mmebe iwu, nke ikpe na nke ndị isi). Obodo dị n’elu Pearl River Delta na ókèala ahụ bụ otu n’ime obodo ndị mmadụ kacha biri n’ụwa. E nwere ihe karịrị ụlọ elu igwe XNUMX na ihe niile dị oke warara, nke mere na nkezi nke si n'ọdụ ụgbọ mmiri ruo n'ugwu bụ ihe karịrị otu kilomita na akụkụ buru ibu ọ bụ ala ewepụtara site n'oké osimiri.
Ndị mmadụ na-eju eju, belụsọ na ịnweghị ego ma nwee ike ịkwụ ụgwọ ụlọ dị elu. N'ezie, a vetikal obodo ebe ndị mmadụ bi, na-ehi ụra ma na-arụ ọrụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mgbe niile ọtụtụ mita n'elu ala. Ihe dị egwu! Dịkarịa ala ileta ...
Nwere ike were ya ọgba aghara okporo ụzọ enwere ike ịbụ na Hong Kong, nri? Na 80s nsogbu ahụ na-agbanye, ọkachasị na mpaghara dị n'etiti etiti na etiti mpaghara, yabụ malitere iche echiche banyere ihe ngwọta na nke kachasị mma na nke kwesịrị ekwesị bụ nke ụfọdụ ndị injinia chọrọ: a usoro njem nke mpụga.
Emere ya na 1987 na malitere ọrụ na 1993. N’ụzọ doro anya, ọ dị oke ọnụ ma ọ bụghị na-enweghị nkatọ na mmefu ego nke gafere na mbara igwe.
Ndị Hong Kong gbagoro agbago sonye n'okporo ụzọ Queen's Central, na mpaghara Central, yana Conduit Street na Middle Levels ma ọ bụ Mid-Levels. Y’oburu n’ichoputa onyogho, uzo di nkpuru uzo gabigara otutu oge ma obu ighara irigoro ma rida otutu otutu mpaghara ndi a ewerewo ndu nke aka ha ma nwekwaa ahia di uku nke di n’etiti ulo ahia, ulo na ebe nri.
Usoro dum Ọ dị mita 800 n’ogologo ma nwee ike ịrị elu mita 135. Ọ bụghị otu steepụ mana a usoro nke ndi nbuli elu nke 18 na uzo ato na akpaka. Njegharị ahụ gwụchara na nkeji iri abụọ ma ọ bụrụ na ịnọ otu ebe mana ị ga-ebelata ya nke ukwuu ma ọ bụrụ na ị gbagoo arịgo. Ọ bụrụ na usoro a adịghị, ụzọ ahụ ga-aka adị ogologo ma ị ga-arịgo ma ọ bụ gbadaa na zig zag.
Ma n'ihi na ndị mmadụ na ọ bụ ibu uru na o doro anya na ihe ruru otu narị puku ndị ji ụkwụ aga kwa ụbọchị na-eji steepụ eme ihe kwa ụbọchị. Site na elekere isii nke ụtụtụ ruo elekere iri nke ụtụtụ steepụ na-agbada ugwu ahụ site na elekere iri nke ụtụtụ ruo elekere iri nke isii nke ugwu ahụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịgbada mgbe ha gbagoro, dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike iji steepụ nkịtị na ramp ndị na-agba ọsọ na nke akpaka: ngụkọta nke nzọụkwụ 6.
Ebe nkiri Hong Kong
Ihe kachasị eme bụ ịmalite ije site na ala, si na Queen's Road Central. N'ihu n'ihu ị nwere Market Kasị nke bụ saịtị kwesịrị ileta n'ihi na e wuru ya na 1938 n'ụdị Bauhaus. Ebe a abụwo ahịa mgbe niile na afọ ndị na-adịbeghị anya, emegharịrị ya ka ọ bụrụ ebe ahịhịa ndụ nwere ụlọ ahịa, ubi na ụlọ nri.
Havinghụ nke a, ị nwere ike ịmalite njem ahụ site na iji akpa ụzọ na-akpaghị aka na-aga n'okporo ámá Cochrane, gafee Stanley Street, ezigbo uzo mara nma nke nwere ulo ahia. Walzọ na-aga n ’ije ga - eduga gị n’ akwa ụkwụ na - agafe agafe wellington n'okporo ámá, ọmarịcha ihe osise nke Hong Kong n’onwe ya, na-agafe na ya nke abụọ ụzọ na-akpaghị aka na-aga n'ụzọ gafere gị na Cochrane ruo Lyndhurst Terrace, saịtị wuru na ọkara nke mbụ nke narị afọ XNUMX na mbụ bụ Red Light District nke ndị Europe.
Finally mechara nwee ọnụ ụzọ nke akụkụ nke atọ nke gangway na-akpaghị aka, na nke ikpe azu, na gaa n'ihu n'okporo ámá Cochrane ruo mgbe ọ ga-ezute Hollywood Road. E nwere footbridge n'ebe ahụ na-agafe ma na-agba ọsọ n'okporo ụzọ Hollywood ruo Shelley Street.
Ga-ahụ ọmarịcha Ogige Ndị uwe ojii nwere ogidi Doric. wuru na 1864. ma di nso na Mkpọrọ Victoria, ha abụọ nọ ugbu a ịmegharị dị ka ebe ọdịbendị.
N'ezie, Hollywood Road bụ n'okporo ámá dị mkpa, otu n'ime ndị mbụ malitere na Hong Kong colonial. Taa, ụlọ ndị ochie na ebe a na-ese ihe juru eju. Ọzọkwa karịrị 300 mita si ya na-agafe agafe akwa bụ Molọ Man Mo, otu n'ime ndị kasị ewu ewu n'etiti ndị njem kemgbe ọ malitere na 1847.
Ma ọ bụrụ na ị na-amasị curiosities ma ọ bụ na-ewe kemmasi foto mgbe a ole na ole mita ị ga-ahụ Uzo Ugbo, n'ihu ụlọ nsọ ahụ, otu ụlọ opium ochie, taa, ọ nwere ụlọ ahịa na-achọ ịmata ihe, ụlọ ahịa ya na bazaa.
Site na Hollywood Road ị na-aga Staunton Street site na ndị mgbapụ Ha na-esi n’ọdụ ụgbọ mmiri ebuga gị na Shelley Street. Akụkụ a dị mkpụmkpụ, mana site na Shelley, ngalaba ndị kachasị ogologo na-eburu gị ruo ọkwa Middle amalite. Ọ bụ kpọmkwem na nkebi a dị mkpirikpi ka a ewu ewu district baptizim dị ka SoHo. Tupu a raara ya nye ire nke ihe maka olili ozu ma taa ọ bụ ezigbo ọchị na nightlife district.
Enwere ụlọ oriri na ọ restaurantsụ ,ụ, ụlọ ahịa, ụlọ ahịa na ụlọ mmanya na ehihie na abalị n'okporo ámá Shelley ma ọ bụ Staunton. Nrịgo ahụ mechara hapụ gị n'okporo ụzọ Elgin Street, ka dị na SoHo, nwee ọtụtụ ụlọ mmanya na ụlọ nri. Crossgafe ọzọ bụ na Okpokoro Street, ebe ị ga-agabiga akwa mmiri yiri U nke jikọtara ụgbọ elu abụọ, nke ị ga-ahapụ na nke ị ga-aga iji gaa n'ihu njem gị Okporo alakụba.
Na mpaghara ị nwere ike ịga leta Dr. Sun Yat-sen Museum, onye agha maka owuwu nke China nke oge a na Lọ ihe nkiri nke sayensị ọgwụ. Mpaghara a dị jụụ karịa SoHo ma jiri nwayọ bụrụ ebe obibi. Ọ bụrụ na-amasị gị akụkọ ihe mere eme nke Asia na otu n'ime ụlọ ndị a biri Dr. Rizal, a fighter nke Philippine mgbanwe. Ọ bụ mpaghara Rednaxela Ofel na n'ihu ihu e nwere ụlọ alakụba malitere na 1915.
Ya mere, anyị na-abịa nke ikpeazu azu, nke ikpeazụ gbatịrị si alakụba Street, ọzọ na-agafe agafe akwa akwa gafee Robinson Road na njedebe nke njem usoro na Okporo ụzọ n'okporo ụzọ dị n'etiti. Ọ bụ ebe obibi ma ọ naghị enwe nnukwu ọrụ mana ọ bụ njedebe njedebe nke sekit ahụ ma anyị agaghị efu ya.
Ọzọkwa, ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ileta Ogige Zoological na Botanical Hong Kong Ha were ije ga-ewe ha nkeji iri na ise.
N'ikpeazụ, ịgbada, ị nwere ike ịgbada na steepụ mana ọ bụrụ na ike gwụrụ gị ma ọ bụ chọọ iji usoro njem, ịnwere ike iburu ya minibuses na-acha akwụkwọ ndụ, nọmba 3, dị nanị mita 20 site na ọdụ ọdụ ụgbọ elu. Ọ na-arụ ọrụ n'etiti etiti oge dị n’etiti minit 5 na 10 wee hapụ gị na Central Station MTR.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Obodo » Hong Kong » Hong Kong escalators, njem na-atọ ụtọ
Ihe ị ga-ahụ na ime n’obodo Belfast
Ebe ị ga-aga leta ọdịda a